Maalinta: 10-ka July, 2018
Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul, 21-24 Agoosto inta u dhaxaysa taarikhda Ciidul Adxaa gaadiidka dadweynaha 50 boqolkiiba ayaa qiimaha dhimista adeegga la go'aamiyay inuu bixiyo. Golaha Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, waa shirkii ugu horreeyay ee shirarkii Luulyo ee ka dhaca dhismaha Saraçhane [More ...]
Mashruuca degmada Antalya ee Magaalo Weynta Magaalada sida garaashka gawaarida la dhigto ee hoos yimaada garaashka Cumhuriyet ee Xaafada Dhulka hoostiisa ee dhigashada gawaarida Lot ayaa si dhakhso ah kor ugu kacaya. Heerka ugu dambeeya ee Mashruuca Sarampol waa kan ugu sareeya [More ...]
Shirkii seddexaad ee GE-ga Taageeridda Horumarinta Mashruuca Ganacsiga Caalamiga ah (URGE), kaas oo la bilaabay iskaashiga Wasaaradda Dhaqaalaha iyo Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Sivas iyada oo ujeedadu tahay "koritaanka iyo furitaanka qaybta tareenka ee suuqyada ajnabiga ah" ayaa lagu qabtay TÜDEMSAŞ. [More ...]
Sida loo raaco TUSEMAS
Sivas, Turkey ku taallaa inta u dhaxaysa hay'adaha muhiim Railway Machines Industry Inc. (TÜDEMSAŞ), Turkey ayaa la yaaban sida loo raaco Jidka waafaqsan 2023 tusay. Heerka adduunka, tayada dhaqaalaha iyadoo la raacayo tikniyoolajiyadda kobcaysa [More ...]
Muwaadiniinta Tareenka ah ayaa sheegay in Moments
Inta udhaxeysa degmooyinka Tekirdag Muratli iyo xaafada Corlu Sarilar ee shanta gawaarida tareenka rakaabka ayaa la buriyay. Shilka waxaa ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen 24 qof. Muwaadin hal baabuur oo burburay: Wax kasta 338-5 [More ...]
Bülbül: download Aan ka hadalno xiriirka ka dhexeeya Trabzon oo aan ahayn xidhiidhka qadka tooska ah ee tareenka loo qoondeeyay Khadka la go'aamiyey, qandaraaska faahfaahinta faahfaahinta Trabzon Railroad Platform SözcüSü iyo Bülbül, Gudoomiyaha Rugta injineerinka farsamada, Erzincan- Trabzon Demir [More ...]
Gayrettepe 3. Goorma ayaa Mashruuca Mitrooga Madaarka Furan?
Waxay ku taallaa inta u dhaxaysa 3 Istanbul, mashaariicda ugu weyn oo ugu caansan Turkiga. Waxaa weli socota tirinta tirinta furitaanka mashruuca garoonka diyaaradaha. Istanbul 3. Xafladda furitaanka garoonka diyaaradaha sida loo qorsheeyay 29 Oktoobar 2018 [More ...]
Injineer khabiir tareenka ah ayaa qiimeeyay shilka SoL. Injineerka akhristaha ee SoL, oo ​​carrabka ku adkeeyay inay jirto qalad farsamo iyo in aan la qaadin tallaabooyinka halista ah ee buundada iyo isgoysyada waaweyn, [More ...]
Gaadiidka Guud ee Bulshada Feslikan Kordhay
Antalya Metropolitan Municipal, 30 kiiloomitir u jirta bartamaha Feslikan Plateau waxay bilowday inay kordhiso tirada adeegyada basaska. Safarkii ugu horreeyay wuxuu abuuray qanac weyn. Helitaanka Feslikan Plateau, oo ay dadka Antalya ay si weyn u isticmaalaan xagaaga, ayaa si fudud ku noqotay. [More ...]
385 Kilometer Asphalt to Selendi
Degmada Manisa ee ku taal gobolka oo dhan 4 sano oo hartay, 3 kun iyo 383 kiiloomitir oo ah wadada laamiga ah. Siinta gaadiid raaxo leh oo aamin ah muwaaddiniinta iyo u bandhigida xaafado badan asphalt markii ugu horeysay [More ...]
Duulimaad Dheeraad ah oo ku socota Malatya-Elazığ Buses
Basku hadda waa hal mar. Ku dhawaad ​​2 saacadood oo safar ah, oo soo jiidata dareenka muwaadiniintu waxay siisaa safar safar miisaaniyad kasta. Intaas waxaa sii dheer, muwaadiniinta naafada ah waxaa lagu siiyaa lacag la’aan iyadoo muwaadiniinta 65 sano ka weyn la siiyaa dhimisyo kala duwan. this [More ...]
Xannibaadda Gaaritaanka Gawaarida ee Kemeralti
Dowladda Hoose ee Magaalada polzmir waxay garwaaqsaneysaa mashruuca dhismaha wadooyinka ee loo diyaariyay soo nooleynta Kemeraltı, oo ah xarunta dukaameedka taariikhiga ah ee magaalada. Laga bilaabo Julaay 15, Kemeraltı Bazaar wuxuu awoodi doonaa inuu galo gawaarida kaliya waqtiyada qaar ee maalinta. Dadka lugaynaya maalintii [More ...]
Sharraxaadda Shilalka Tareenka ee ka socda Xarunta injineernimada Meteorological
TMMOB Rugta Injineeriyada Saadaasha Hawada; 08 / 07 / 2018 oo ku saabsan shilka tareenka ee ka dhacay Tekirdag, Naxariistii Ilaahay ee ku timid muwaadiniinteenii ku dhimatay, samir iyo bogaadin qaraabada muwaadiniinta dhaawacmay waxay u rajeynayaan soo kabasho deg deg ah. our Country [More ...]